Adlale Kuhle Amaqembu Amela iZimbabwe Kwezenguqu lakuRugby
Kuwahambele kuhle amaqembu amela ilizwe emidlalweni ebalisa owenguqu kanye lowe-rugby ngempelaviki.
Iqembu lenguqu elamaWarriors linqobe eleDRC nge2 ka 1 ngoMgqibelo emdlalweni wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano wentshantshu zezwekazi laseAfrica ngomnyaka ozayo.
Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe likhokhela ngemiklomelo emithathu kungalane yemiklomelo kuGroup G njalo lilemiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu.
EleDRC kanye leleCongo Brazzaville wona alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kuthi eleLiberia yilo elijeke amanye emsileni wengalane ngomklomelo owodwa.
Umkhankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano weAfcon ozaqhutshelwa eCameroon uqhubekela phambili kuliviki lapho eleZimbabwe elizemukela khona eleDRC ngoLwesibili enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, bekulemidlalo emithathu edlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League ngempelaviki.
NgoMgqibelo iqembu leBlack Rhinos leleHarare City abe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 kuthi ngeSonto iqembu Shabanie Mine libe ngutshiki lobhanqa leqembu leHighlanders, okuyimpumela etshiye umsekeli kamqeqetshi weBosso uMandla Mpofu edane kakhulu.
“Kithi kufana lokuthi silahlekelwe yimiklomelo emibili njengoba besidlala leqembu elisemsileni wengalane yemiklomelo njalo injongo yethu bekuyikuba sithathe yomithathu imiklomelo ukuze sifeze iphupho lethu elokuphutsha isizini yalonyaka sisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo,” kutsho uMpofu.
Komunye umdlalo wangeSonto iqembu leDynamos linqobe eleCAPS United nge2 ka 1 okuyimpumela ebangele ukuthi likhuphuke liyehlala endaweni yetshumi lanye engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo engamatshumi amathathu lane.
Kumdlalo we-rugby odlalwa ngabadlali abayisikhombisa, iqembu labesilisa elimela ilizwe yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi leAfrica oqhutshelwe elizweni laseTunisia ngempelaviki.
Abafana beZimbabwe banqobe iqembu leKenya nge17 ka 5 ku final njalo ukunqoba kwabo lokhu kubaphe ilungelo lokuphatheka kumncintiswano weWorld Rugby Sevens Series, wona abakade sebeleminyaka emithathu bengaphatheki kuwo.
Iqembu leZimbabwe like laba zintshantshu zezwekazi lase Africa ngomnyaka ka 2000 kanye langomnyaka ka 2012.